भारतका चर्चित अभि’नेताको यसरि भयो दु:खद नि’धन – Taja Khawar
भारतका चर्चित अभि’नेताको यसरि भयो दु:खद नि’धन
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ समय: १९:५४:३४
September 2, 2021 125
हृ’दयघा’तका कारण भारतीय अभिनेता सि’द्धार्थ शुक्लाको सोमबार निधन भएको छ । लो’कप्रिय रियालिटी सो बिग बोस १३ का विजेता समेत रहेका शुक्लाको नि’धन भएको भारतीय संचा’रमाध्यमले जनाएका छन् ।
४१ वर्षीय शुक्लालाई बिहान हृ’दयघात भएको थियो। उनी आमा र दुई बहिनीसँग बस्थे। शुक्लाले शोबिजमा मोडलिङ गरेर आफ्नो करिअर सुरू गरेका थिए। टेलिभिजन सिरियल ‘बाबुलका आंगन छुटे ना’बाट उनले डेब्यू गरेका थिए। उनी भारतको चर्चित रि’यालिटी शो बिग बोस सिजन १३ का विजेतासमेत हुन्।
उनी पछिल्लो’पटक ओटीटीमा प्र’सारण भएको बिग बोस र डान्स दिवानेको तेस्रो सि’जनमा पनि देखिएका थिए । बिग बोसको कारण उनी चर्चित भएका हुन् । उनले ठूलो पर्दाको फिल्म ह’म्पटी शर्माकी दु’ल्हानियाँमा पनि अ’भिनय गरेका थिए ।
-taja khabar बाट
चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठलाई के भयो ? आकाश अस्पताल भर्ना भएको थाहा पाए लगत्तै भेट्न अस्पताल पुगिन् पूजा । के पूजाले अहिले पनि आकाशलाई उत्तिकै माया गर्छिन् ?
September 2, 2021 adminसमाचारNo Commenton चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठलाई के भयो ? आकाश अस्पताल भर्ना भएको थाहा पाए लगत्तै भेट्न अस्पताल पुगिन् पूजा । के पूजाले अहिले पनि आकाशलाई उत्तिकै माया गर्छिन् ?
सक्किगोनीका चर्चित हाँस्य कलाकार बलेकी आमा पहिलो पटक मिडियामा सार्वजनिक भइन्, हिरोइन् जस्तै सुन्दरी र मिठो बोल्न सक्ने प्रतिभाकी धनी रहिछन् बलेकी आमा, पहिलो पटक मिडियामा आएर बलेको विबाह यि सुन्दरी डाक्करसँग गर्न लागिएको रहस्य खोलीन्, प्रिज्माहरु साथी मात्रै भएको भन्दै अर्नथ नसोच्न पनि आग्रह गरिन्, बलेकी आमासँग गरिएको यो रमाइलो कुराकानी हेर्नुहोस् भिडियोमा
चर्चित नायिका अञ्जु पन्त आमा बन्दै, विबाह गरेको १ वर्षमा अञ्जुले दिँदैछिन् खुशीको खबर । अञ्जुको खुशीको खबर सुनेर पूर्व पतिले दिए शुभकामना, हेर्नुहोस् भिडियो
चर्चित अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले अन्तत गर्ने भइन् आँफुभन्दा कान्छा यि ह्यण्डसमसँ विबाह, दीपाले ऋषी धमलाले खोजीदिएका यि युवकसँग गर्न लागेकी हुन् विबाह, विबाहका लागि भनेर दीपा सुन पसलमा पुगिन् र एक झोला पैसा दिइन् सुनको, बेहुली बन्दा सुनै सुनले ढाकिनेछिन् दीपा, ढिलै भएपनि दीपाले गरिन् कमाल
Last Updated on: September 2nd, 2021 at 7:54 pm
३०१ पटक हेरिएको